Diyaaradaha Ruushka Oo Duqeeyay Deegaan Dhaca Duleedka Dimishiq. – Calamada.com
Diyaaradaha Ruushka Oo Duqeeyay Deegaan Dhaca Duleedka Dimishiq.
calamada March 5, 2016 1 min read
Xilli lagu guda jiro maalintii todobaad ee xabad joojintii looga dhawaaqay dalka Suuriya ayaa diyaaradaha dagaalka ee Ruushka waxay wel sii wadaan duqeymaha ay ka geysanayaan dalkaasi, iyagoona duqeyn ku qaaday magaalada Dowma ee ku taalla baadiyaha magaalada Dimishiq.
Magaalada Dowma waxaa maamula Kooxaha Kacdoon wadayaasha ee dalka Suuriya, iyadoo aysan wax saldhigyo ah ku laheyn xoogagga Mujaahidiinta ee laga soo reebay xabad joojinta. Goob joogayaal gudaha magaalada ku sugan ayaa sheegay in Seddax gantaal lagu garaacay meel duleedka ka ah magaaladaasi.
Sidoo kale, wararka ka imaanaya Mandiqadda lagu magacaabo Al-Maraj ee duleedka magaalada Dimishiq waxay sheegayaan in Nidaamka Nuseyriga ah uu Ciidamo aad u badan ku uruurinayo deegaankaasi, iyagoo doonaya inay la wareegeen Mandiqadda Istaraatijga ah ee lagu magacaabo Tal-Farzaat, waxaana arrimahani oo dhan ay dhacayaan wakhti ay todobaad ka hor Wadamada reer galbeedku ay ku dhawaaqeen waxa ay ugu yeereen heshiis xabad joojin ah oo ka dhaqan galaya dalka Suuriya.
Dhinaca kalena dibad baxyo waaweyn oo ay kasoo qeyb galeen kumanaan dadweyne ah ayaa maalintii shalay Salaadda Jimcaha kadib waxay ka dhaceen deegaanno badan oo hoos yimaada gobollada kala ah Xalab, Ximis, Idlib, Darca iyo Dimishiq.
Dibad baxayaashu waxay kor u lulayeen Calamo iyo boorar ay ku xardhanaayeen halku dhigyo ay ku diidanyihiin heshiis ku sheegga xabad joojinta ah ee reer galbeedku ay garwadeenka ka yihiin, waxayna Shacabku ay dalbanayeen inuu sii socdo halganka xorriyad doonka ah ee lagu ridayo Maamulka uu hogaaminayo Bashaar Al-Asad.
Previous: Dhageyso Barnaamijka Caalamulyowm Ee Andalus 25-05-1437 Hijri.
Next: Dhageyso Barnaamijka Faafreebka Wararka Andalus 26-05-1437 Hijri.